Microsoft na-agbakwunye ihe mmetụta mkpịsị aka ya na keyboard ya ikuku Esi m mac
Daybọchị bụ ihe mkpịsị aka ihe mmetụta na ọ bụrụ na nke a ụtụtụ / ehihie anyị ahụwo ozi ọma banyere mmejuputa nke akara mkpisiaka ihe mmetụta na a ama si Chinese ike Vivo nke ngwaọrụ e agbachi site a mmetụta enịm n'okpuru ihuenyo nke At Otu oge, ugbu a anyị na-ahụ mbata nke ngwaahịa ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Microsoft na-agụnye òké ọhụrụ na kiiboodu Ikuku ihe pụrụ iche, ebe ọ bụ na keyboard a Ọ gụnyere ihe mmetụta mkpịsị aka na otu n'ime igodo ahụ.
Nke a bụ ihe ọhụụ Microsoft nke ọhụụ
Obi abụọ adịghị ya na akara mkpisiaka akara aka akara "akara" nke ọma na mgbasa ozi a ma ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa na ngwaọrụ ndị dị ugbu a. N'okwu a, uru ya dị ka nke anyị nwere na 2016 ọhụrụ MacBook Pro Retina na Touch Bar, na-emeghe kọmputa (ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na enwere ike iji ya Mac maka Apple Pay) ma jiri ya na ngwa ndị kwekọrọ. Ọhụrụ Microsoft Modern Keyboard, nwere ike zụrụ iche iche na ndị ọrụ Mac chọrọ iji ya agaghị enwe nsogbu ndakọrịta, ee, ọrụ mkpisiaka unlock kpọghee ekwt ọrụ ga-arụ ọrụ.
Na nke a, na price nke ọhụrụ kiiboodu na kpọmkwem akara mkpisiaka mmetụta isi bụ 129,99 dollar na ya ukara website, na òké nwere ike zụrụ $ 49,99. Ngwaahịa abụọ a na-apụta na weebụ mana enweghị ohere ịzụta ugbu a, ha pụtara na akara nke "Na-abịa oge adịghị anya" ọ dịghịkwa ụbọchị a ga-ebido ire ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Microsoft na-agbakwunye ihe mmetụta mkpịsị aka ya na keyboard ya
Ihe mgbakwunye ọhụrụ na Apple